Toogasho Lagu Dilay Axmed Cabdi Ina Neyloon. – Calamada.com
Toogasho Lagu Dilay Axmed Cabdi Ina Neyloon.
calamada August 29, 2018 1 min read
Ciidamada Mujaahidiinta ka howlgala Buuraha Goolis ayaa howlgal qorsheysan ku dilay nin Burcad ah oo muddo ay baadi goobayeen kaasi oo dhibaatooyin kala duwan ku hayay dadka Muslimiinta.
Howlgalkaan oo ahaa mid qorsheysan oo ay fuliyeen Ciidamada Mujaahidiinta Buuraha Goolis ayaa lagu dilay nin lagu magacaabi jiray Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaanay Ina Neyloon, kaasi oo ahaa gacan ku dhiigle burcad ah oo gacan saar la lahaa mamaulka Ashahaada la dirirka ee Puntland .
Waxa uu howlgalkan ka dhacay galbeedka deegaan lagu magacaabo Ceelweyn oo uu ku dhuumaaleysanayey Murtadka la khaarijiyey.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa ninkan ku daba jiray muddo Shan Sanadood ah, wuxuuna intaas ku dhuumaaleysanayey deegaanada ku hoosjira gacanta maamulka Ridada ee Puntland.
Murtadkan ayaa ahaa gacan ku dhiigle caan ah oo laga yaqaano deegaanka, wuxuuna dhowr jeer dadka deegaanka kula kacay, dhac, dil iyo kufsi bareer ah oo ka dhan ah dadka Muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaasi.
Saraakiisha Mujaahidiintu waxay noo sheegeen in ninkan isagoo hubeysan uu imaan jiray tuulooyinka baadiyaha, halkaas oo ku kufsan jiray dumarka, kuna qaadan jiray hantidooda, halka qofkii ka hor yimaada rabitaankiisana uu dili jiray.
Mujaahidiinta oo ka jawaabaya dacwado isdaba joog ah oo kaga yimid dadka deegaanka ayaa ugu dambeyntii Allaah waafajiyey in ay Muslimiinta ka horleexiyaan Sharta Mujrimkaas.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 18-12-1439 Hijri.
Next: Dagaal Culus Oo Ka Socda Magaalada Marka.
1 thought on “Toogasho Lagu Dilay Axmed Cabdi Ina Neyloon.”
Qaainkii dadka muslimiintaa dhibo saasaa u danbeyneyso